Programmer's Diary: ဟက်ပီးဘက်ဒေးဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ တစ်ညတာ
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 11:36 AM
ညီညီရေ .. ဒါလေး ခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ် ။ သိပ်ကောင်းတာပဲ ။ စိတ်ဝင်စားဖို့လည်း ကောင်းတယ် ။ အသေးစိတ်ရေးပေးထားတာတွက် ကျေးဇူးတင်တယ် ။ အမ အကြိုက်ဆုံးတွေထဲ ထည့်လိုက်ပြီ ။
အများအားဖြင့် အမကတော့ ကိုဖြိုးလို အလွယ်နည်းလမ်းပဲ လိုက်တယ် အဟား ။ ဒါကြောင့် ဒေတာတွေကို အကုန် D-drive မှာပဲ စုထည့်ထားလိုက်တယ် ။
April 11, 2008 9:47 PM
just curious.. do u use antivirus softwares and realtime scans?
as an IT pofessional, i am sure you do.. how does this get on to ur PC?
အကြိုက်ဆုံးတွေထဲ ထည့်ပေးထားလို့ ကျေးဇူးပဲ မဂျစ်.. ။ တခါတလေတော့လဲ အလွယ်လမ်းလိုက်တာ လူသက်သာတယ်ဗျ။
ကိုမောင်မောင်ရေ.. AVG ထည့်ထားပေမယ့် ဘယ်က ဘယ်လို ၀င်သွားမှန်း မသိပါဘူးဗျာ.. thumb drive တစ်ခုကနေ ၀င်လာတယ် ထင်ပါရဲ့။ သံလွင်အိပ်မက်အတွက် ကိစ္စလေးတွေအတွက် ရှုပ်နေတာနဲ့ ခုမှ ပြန်ဖြေဖြစ်တာ ဆောရီးပါဗျာ။
ကိုညီရေ အစ်ကို ပြောပြမှပဲ ၀င်းဒိုးစီဒီရဲ့ I386 folder ထဲမှာ ntldr ဖိုင်ရှိတယ်ဆိုတာ
ကျွန်တော်စက်က OS တွေ သုံးမျိုးလောက်တင်ထားတော့ boot အတက် repair mode မှာ
cd drive letter ကို တော်တော်ရှာကတယ်။
လက်စသတ်တော့ သူက G: ဖြစ်နေတာကိုး။
copy G:\_i386\_ntldr C:\_ ပေါ့လေ။
ကျွန်တော့်စက်က ဗိုင်းရပ်စ် ၀င်တာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် စမ်းချင်လို့
တမင် ntldr file ကို ဖျက်လိုက်တာ။
အစ်ကို ပညာဖြန့်ဝေလို့ ကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
May 02, 2008 12:42 AM
အခုတစ်ခါတော့ Format ချဖို့နေနေသာသာ Hard Disk ကြီးပါ ပျောက်နေပြီကွ။ ကိုင်း။ ဘယ့်နှယ့်ရှိစ။ စက်က Vista ပဲခင်တွယ်ပုံ ထောက်တယ်။ Windows XP နဲ့ Boot တက်ရင် လုံးလုံးလျားလျား Hard Disk ပေါ်မလာတော့ဘူးဟေ့။